बुबालाइ बृद्धआश्रममा छोड्ने छोराले भने,‘बाऊ भनेर त्यो बुडोलाई पाल्दा धर्म लाग्छ भने थुक्छु म त्यो धर्मलाई ! – PathivaraOnline
Home > समाचार > बुबालाइ बृद्धआश्रममा छोड्ने छोराले भने,‘बाऊ भनेर त्यो बुडोलाई पाल्दा धर्म लाग्छ भने थुक्छु म त्यो धर्मलाई !
admin January 14, 2021 January 14, 2021 समाचार	0
आफ्नै जन्म दिने बाबुलाई सानोमा आफुलाई र आमालाई नहेरेको भन्दै छोराले वास्ता नगरेपछि अहिले उनका ती छोराका बाबु बृद्धा आश्रममा छन् । उनले दिनहुँ गेटमा अरुलाई नै भेट्न कोही आउँदा पनि आफ्ना छोराहरु आएकी भनेर बाटो हेरी बस्छन् । उमेरले ७० लागेका ती बाबु हुन् किशोर लामा । उनका दुई छोरा र एक छोरी छन् । श्रीमती पनि जिउँदै छन् । सबै परिवार हुँदाहुँदै पनि उनी बृद्धाश्रम गएका छन् ।
छोराको भनाई अनुसार किशोर लामाले दुईवटी श्रीमती बिहे गरेका थिए । र सम्पत्ति सबै कान्छि श्रीमतीको नाममा गरिदिएको र आफ्नी आमालाई हेला गरेका रहेछन् । बाबु जीवित हुँदाहँदै आमाले दःखले आफुहरुलाई हुर्काएको हुनाले छोराछोरी सबैले आमालाई नै समर्थन गर्दा रहेछन् । छोराको भनाई अनुसार उनका बाबुले (किशोर) ले आजसम्म आफ्ना छोराछोरीलाई आफ्नो घरपरिवारको बारेमा नचिएको हुनाले आफुले पनि कुनै काका, बाजे, मूल घर केही पनि नचिनेको बताए ।
<<< वाकी भिडियोमा हेर्नुहोस >>>
एनसेलको मुख्य कार्यालय नै किन टार्गेटमा परेर बम बिस्फोट भयो? हेर्नुहाेस पुरै जानकारी…